Ny ratsy ateraky ny sivana mahazatra · Global Voices teny Malagasy
Zava-mahazatra ny ankamaroan'ireny sary ireny. Inona àry no olana eto ?
Voadika ny 25 Aogositra 2021 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, Français, Español, English
‘Sivana’ Sary noforonin'i Oiwan Lam.
Tsy ny sivana rehetra no mahavariana sy mampitolagaga. Nandinika fehezana angondrakitra iray aho, ahitàna ireo sary an'arivony maro voasivana avy amin'ireo hetsipanoherana tamin'ny 2019 tao Hong Kong (Jona hatramin'ny Oktôbra 2019) nangonin'ny The Citizen Lab avy amin'ireo sehatry ny media sôsialy shinoa, isan'ireny ny Wechat an'ny Tenchent. Rehefa nitety ireo andiana saripika voasivana, ny ankamaroany dia mipoitra miaraka amin'ny karazana sary izay mahazatra ny mahita azy voasivana: ireo sary kidaladala mahatsikaiky anehoana an'i Xi Jinping, fa koa ireo saripika maneho ny herisetran'ny pôlisy ary ireo fitakiana famaizana ho an'ny governemanta shinoa sy ny ao Hong Kong. Efa mihoatra ny roapolo taona aho no nikaroka momba ny sivana ataon'ny shinoa ety anaty aterineto, ary tsy gaga intsony amin'io kazarana sivana io, saingy tonga saina ihany koa hoe manomboka lasa manao ireny sivana tsy tapaka ireny ho toy ny ara-dalàna aho, izay manelingelina ahy, satria ireny saripika ireny dia tsy tokony hosivanina ao anaty fiarahamonina iray demaokratika, ary satria koa ny sivana tahàka izany dia fanitsakitsahana ireo fenitra iraisampirenena momba ny zon'olombelona eken'ny maro.
Kanefa, mbola misy sary vitsivitsy ao anatin'io angona io no tsy nampoiziko. Sary mahazatra ihany ny ankamaroany, azo lazaina hoe mahazatra, ahitàna ireo mpanao hetsipanoherana. Rehefa mijery ireny sary ireny, ny tonga tao an-tsaiko voalohany dia “Fa inona no olana eto e? Maninona ity no voasivana?” Toy ity saripika ity, ohatra :
Saripika voasivana hita ao amin'ny Net Alert an'ny Citizen Lab, nampiasàna ny lisansa Fair Use: io dia ‘mampiseho fotoana iray toa nivorivorian'ireo mpanao hetsipanoherana teny rehetra teny, niandry, tsy nanao na inona na inona niavaka …’
Izaho mino fa tao amin'ny Anjerimanontolo shinoa ao Honk Kong io sary io no nopihana tamin'ny 2 Septambra 2019, fony nikarakara fitorevahana ireo mpianatra mba hanombohana ny tapabolana fibodoana ny fampianarana, ho fanoherana ilay tolodalàna famindràna olomeloka. Tamin'izany andro izany, namaky fanambaràna iray niraisana ny solontenan'ireo mpianatra ary nihiaka teny faneva. Io sary io manokana dia mampiseho fotoana iray toa nivorivorian'ireo mpanao hetsipanoherana reny rehetra teny, niandry, tsy nanao na inona na inona niavaka. Amin'ny teny hafa, io dia saripika iray maneho fotoana iray tony nandritra ny hetsika iray famoriambahoaka am-pilaminana. Araka izany, nahoana io no voasivana?
Zavatra iray mety hisy ny hoe nanapaka hevitra hanivana io saripika io ireo mpanivana satria nikasa ny hamafa izay rehetra maneho ny fisian'ireny hetsika ireny ry zareo. Ny tanjona, amin'ity tranga ity, dia ny handany fotoana mba hahafahan'ny Antoko mamaritra izay tokony ho teboka resahana. Nokasain-dry zareo ny hisoroka toedraharaha iray mety hahatonga ny vahoaka hametraka fanontaniana eo am-pahitàna ireny saripika ireny, nefa tsy mbola manana valiny efa vonona azo aroso akory ny Antoko.
Zavatra iray hafa mety hisy, izay heveriko fa mety hitranga, dia ny hoe nosivanina io sary io satria mampiseho: vahoaka iray. Araka ny famaritan'ilay Amerikàna filôzôfa, John Dewey, hoe ny ‘vahoaka iray dia “andian'olona izay, eo am-piatrehana olana mitovitovy, mahatsapa an'izay no sady mifanentana hiaraka hiatrika an'ilay olana” (The Public and its Problems, 1927). Ny mifanohitra amin'izany anefa no zavatra tian'ny Antoko ho eritreretinao: tsy vahoaka io, fa andian'olona maro fotsiny. Araka ny fahatakaran'i Gustav Le Bon, ny andian'olona maro, mifanohitra amin'ny hoe vahoaka iray, dia “ny fahataitairany, ny fahasosorany, ny tsy fahavitany mandinika, ny tsy fananany saina mahay mamakafaka, ny fanomezana vàhana be loatra ny fihetsehampo” no mamaritra azy (The Crowd: A Study of the Popular Mind, 1895). Tohizan'ny fitantaràna fampielezankevitry ny CCP (antoko kaominista shinoa) ny mandoko ireo mpanao hetsipanoherana ho olona mahery setra, tsy misaina, entin'ny fo, sy hoe tsy mahafeno an'io fitantaràny io ity sary ity.
Sary voasivana hita ao amin'ny Net Alert an'ny Citizen Lab, nampiasàna ny lisansa Fair Use
Ny maha-fahazarana an'ilay ratsy no noresahan'i Hannah Arendt, sy ny hoe matetika io tsy ilay karazana ratsy anodinkodinan'ny lehilahy ny volombavany, fa mety ho ilay fomba fanaon'ny mpitàna birao manatanteraka izay angatahana ho ataon-dry zareo, tsy misaina momba izay angatahana ho ataony, tsy manontany tena, tsy mamadibadika mitsikera, tsy misaina. Tsy misy hafa amin'izay, tohanako ny maharatsy io fanivànana sary mahazatra io, rehefa manakana antsika tsy hieritreritra. Ny fitantaràna fampielezankevitra dia maniry antsika hanaiky zavamisy manatsotsotra zavatra entina milaza fa ireo mpanao hetsipanoherana dia mahery setra sy entin'ny fo ary tsy misaina, atosiky ny hery avy any ivelany, ary tsy misy afa-tsy izay. Izany no anivànana ny sarin'ireo mpanao hetsika am-pilaminana: tsy mifanaraka amin'ilay fomba fitantaràna, ka mety hitarika antsika hisaintsaina, raha ny marina, ary hanontany tena sy hametraka fanontaniana. Io karazana sivana io dia sady tsy vaovao no tsy mahagaga: saino ny sivana manjo ireo sary toa tsy manantsiny akory ahitàna an'i Winnie ilay Bera.
Saingy na tsy mahagaga aza io sivana mahazatra io, tsy midika izany fa tokony ho ekentsika ho toy ny zava-mahazatra. Verintsika ny fahafahantsika hanana tontolo iray iraisana, toerana ifampijerentsika tsirairay amin'ny maha-olombelona, ao anatin'ny fahasamihafàna, fahamaroana ary fahasarotana, miaraka amin'ny fisiana hevitra maro tsy itoviana, nefa koa misy fahafahana mamaha ny fifandirantsika ao anatin'ny fifampiresahana sy fifanakalozana hevitra. Io tontolo iraisana io no simbain'ny CCP amin'ny alàlan'io karazana sivana io. Manoloana ny famoretana tahaka izany, asaiko ianao hanomboka fifampiresahana iray ary hieritreritra momba ireo fanontaniana manandanja manaraka ireto: ahoana no hahafahantsika mandà sy manilika io karazana sivana io, ahoana no hahafahantsika manomboka manangana tontolo iray iraisana, mampiaty ny rehetra, misy fahasamihafàna, ary mamela ny nofinofintsika handeha hitetitety sy hamela antsika handeha kilaometatra iray eo amin'ny toeran'ny olona iray hafa?
Olon'ny anjerimanontolo i Lokman no sady mpikatroka, Mpiaramiasa amin'ny The Citizen Lab ao amin'ny Anjerimanontolon'i Toronto, ary amin'izao fotoana izao dia miketrika boky iray momba izay niainany ireo hetsipanoherana tany Hong Kong.